Jigjiga: “Markii na laga soo daayay xabsiga Jeel Ogaadeen, waxaa inoo xigay addoonsi” | Biyoguurenews.com
Home Wararka Jigjiga: “Markii na laga soo daayay xabsiga Jeel Ogaadeen, waxaa inoo xigay...
Jigjiga: “Markii na laga soo daayay xabsiga Jeel Ogaadeen, waxaa inoo xigay addoonsi”
In ka badan 800 oo maxbuus oo xabsi ku yaalla magaalada Jigjiga ku xirnaa iyagoo loo haystay inay ONLF ka tirsan yihiin ayaa sanaddii 2018 cafis loo fidiyay, balse galay xaalad nololeed oo adag, sida ay qaar ka mid ah dadkaasi u sheegeen BBC-da.
Waxaa dadkaasi intooda badan laga soo daayay xabsiga dhexe ee deegaanka oo ku magac dheeraa ‘jeel-Ogaadeen”
Xiliyadaas waxaa ka socday, dhaq-dhaqaaq kacdoon shacab oo ka dhan ahaa, xukuumaddii ay EPRD majaraha u haysay.
Maxaabiistan ayaa muddooyin kala duwan oo sanad ilaa iyo dhowr iyo toban sano inta u dhaxaysa ku jiray Jeel-Ogadeen, oo ahaa xabsi lagu tilmaamay inay ka dheceen, xadgudubyo ka dhan ahaa xuquul insaanka, muddadii uu furnaa oo ku sinnayd 17 sano.
Sannadkii 2018-kii, ayaa ku dhawaad 728 maxaabiis ah laga qaaday Jeel – Ogaadeen waxaana la geeyey mid ka mid ah hoolasha shirararka ee Jigjiga gaar ahaan ‘Hoolka shirarka ee Sayid Mohamed Cabdiile Xasan’.
Si uu halkaas ugu la hadlo madaxweynihii xiligaas ee Deegaanka Soomaalida ‘Cabdi Maxamud Cumar oo ay wehelinayaan xubno laga soo xulay madaxda dhaqanka ee Deegaanka iyo xubno ka socday maamulkiisa.
Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu sharaxay in aanay suuragal ahayn inuu sii daayo maxaabiista xiligaas iyada ah, balse loo qaadi doono, Banka Bayaxow oo magaalada Goday kaga beegan dhinaca bariga, u na jira masaafo dhan 45-KM.
Sidoo kale waxa uu sheegay in maxaabiista la siin doono xoolo nool, dhul beereed iyo in guryo ay iyagu halkaas ka dhisan doonaan, si dib ugu soo kabtaan.
Dareen walbahaar iyo cabsi wata ayaa soo food saaray maxaabiista siyaasadeed oo sannado badan naawilayey inay mar uun iftiin xorriyadeed oo buuxa helaan.
Bilowga Xabsigii Labaad ee Bayaxow
Muddo labaatan maalmood ah ayaa maxaabistan lagu ilaalinayay labo ka mid ah kuliyadaha waxbarasho ee ku yaalla magaalada jigjiga, intaas waxaa loo qaaday Bayaxoow. Dhamaan maxaabista aan waraysanay ayaa aaminsan in Bayaxow, ay ahayd xabsigii oo halkiisii ka sii socday.
Waxaa ku adkaatay, maxaabiistan, inay ka jawaabaan waydiimaha uga imaanayey, ehelkooda oo aanay sanado badan is-arag, sida Muxumed Anni oo muddo lix sano ah ku xidhnaa Jeel-Ogadeen, BBC u sheegay.
“Dhibaatadii ugu badnayd ee na la soo daristay waxay ahayd, in marka ehelkayagu na la soo xidhiidhaan, ay na odhanayeen, ma lagu soo daayey hebelow? Haa, ayaan ugu jawaabaynay. ‘Xageed joogtaa’? Meel Bayaxow la dhaho, ayaan ugu jawaabaynay? Miyaadan noo imaanayn? Maya, ayaan ku odhanaynay! Ma kuu imaan karnaa? Maya iima imaan kartaan ayaan ku odhanaynay. Markaas ayey na odhanayeen, haddaa maxaad u lee dahay waa la sii daayey”?
Guriyihii ay dhiseen maxaabiistii la geeyay banka Bayaxoow
Maxamed Maxamuud Maxamed (Daarusalaam) oo maxaabiistaasi aaminsan in la addoonsaday ka mid ah, ayaa sidan u sharxay, sidii loo geeyey Bayaxow iyo waxay kala kulmeen:
“Bayaxow, oo ah goob na lagu addoonsaday waa ban dabayl badan, xiligaana waxay ahayd abaar aan baryahaas roob ka di’in. Waxana na lagu amray inaan dhisno, guryo tiradoodu gaadhayso, 3200. Waxaa na loo sheegay 800 oo ka mid ah inaan annagu lee nahay. Habeen iyo maalin waa na lagu shaqaynayey. Waxaa na waardiyeynayey, laba urur oo Liyuu boolis ah”
Maxamed ayaa sheegay in shaqada ay qabanayeen, iyaga oo ah maxaabiis muuddo dheer oo noloshooda ka mid ah xabsi ku qaatay aanay wax daryeel ah ku haysan. Maxaabiista badankood khibrad uma lahayn shaqada dhismaha.
Xaaladdii caafimaad ee maxaabiista
Badi maxaabistan oo markii hore ba la ildarnaa nafaqo-darro iyo nabarro soo gaadhay intii ay xabsiga ku jireen ayaa haddana waxaa niyad ahaan dhaawacay sida filashadoodii xoriyadeed ay isugu badhashay mashruuc ay aaminsanyihiin in uu ahaa addoonsi.
Maxamed Xuseen Kilaas oo maxaabistaas ka mid ahaa una qaabilsanaa dhanka Caafimaadka ayaa isna BBC-da u xaqiijinay in maalintiiba uu qaabili jiray oo adeeg caafimaad siin jiray 70 ilaa iyo 110 bukaan ah oo ka cabanayay calool-xanuun, tabar-darro iyo dhawaac shaqada oo aysan khibrad hore u laha
Lix bilood oo ay maxaabiistani ku sheegtay ciqaab iyo addoonsi, ayaa soo gabagabowday, bishii 8-aad ee sannadkii 2018-ka. Ka dib dhicitaankii xukuumaddii Cabdi Mohamuud Cumar ay soo soo dajajisay shaqaaaqooyinkii ka dhacay magaalooyin badan oo deegaanka ka mid ah 4 agoosto.
Maxaabiistan oo haatan samaystay urur u dooda xuquuqda guud ahaan dhibanayaasha Deegaanka Soomaalida, ee ay ku tacadiday xukuumaddii hore ee Deegaanka ka talinaysay, ayaa hadda Xukuumadda madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar, ka dalbanaya inay magdhow ka siiso, dhismaha guryihii mashruuca Bayaxow.
Qaar ka mid ah raggani ayaa BBC-da u sheegay in dowladda ay u bllan qaaday in magdhow la siin doono,balse ilaa iyo hadda aysan waxba soo gaarin.
Ma’suuliyiinta Dowlad deegaanka ayaa ka gaabsaday inay arrintaasi kala hadlaan BBC-da.
Previous articleWefti Safiiro ah oo soo gaadhay Hargeisa
Next articleSuxufiga siyaasiga noqday ee yuusuf garad oo farta ku fiiqay boqor buur madow kana dalbaday in uu raaligalin siiyayo